८२ मत नपाउँदा देउवाको सपना चकनाचुर, दोस्रो चरणको चुनावमा आउला त बहुमत ? - ramechhapkhabar.com
८२ मत नपाउँदा देउवाको सपना चकनाचुर, दोस्रो चरणको चुनावमा आउला त बहुमत ?
कांग्रेस सभापति पदको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले थप ८२ मत ल्याएको भए सभापति हुन्थे । त्यति मत ल्याउन सकेको भए खसेको ४ हजार ६८१ मतमध्ये ५१ प्रतिशत पुग्थ्यो र पहिलो चरणबाटै सभापति बन्ने उनको सपना पूरा हुने थियो । तर, उनले सो संख्यामा मत ल्याउन सकेनन् । अब उनको सपना चकनाचुर भएको छ ।
विधानअनुसार मत ल्याउन नसकेपछि उनले सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिस्पर्धाको क्रममा तेस्रो भएका प्रकाशमान सिंह वा चौथो भएका विमलेन्द्र निधिमध्ये एकजनाको समर्थन लिँदा मात्रै सभापति हुने उनको सम्भावना देखिएको छ । होइन भने देउवाले पराजय बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हुन त देउवा १३ औँ महाधिवेशनमा पनि दोस्रो चरणबाटै सभापति भएका हुन् । त्यसबेला तेस्रो भएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समर्थन पाएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेल पराजित हुन पुगे ।
के देउवालाई यसपटक दोस्रो चरणमा तेस्रो भएका सिंह र चौथो भएका निधिले सहयोग गर्लान्? यो प्रश्नबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने, देउवासँगै राजनीतिक रूपमा तिक्तता बढेपछि उनीहरू अलग भएका हुन् । त्यसले गर्दा देउवाले समर्थन पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
भएन सिटौलाको समर्थन निर्णायक
१३ औँ महाधिवेशनमा जसरी पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको समर्थन सभापति हुन देउवाका लागि निर्णायक बनेको थियो । यसपटक सुरुमै समर्थन गर्दा पनि भएन । र, संस्थापन पक्षभन्दा इतर पक्षका विभिन्न उम्मेदवारलाई खसेको मत धेरै देखियो ।
जबकि, यसअघि ६१ जिल्लामा भएको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाको सभापति देउवा पक्ष र दुई जिल्लाको सभापति सिटौला पक्षले जितेको थियो । ६ प्रदेशमध्ये पनि तीन देउवा र एक सिटौला पक्षले जितेको थियो ।
२७ जिल्ला र दुई प्रदेशमा इतर पक्षको जित पनि पहिलो चरणबाटै देउवालाई सभापति हुनबाट सफल भएको छ । जुन इतर पक्षको चाहना थियो । तर, इतर पक्ष विभक्त छ । साभार : जङ्‌ग तामाङ, फरकधार